Macluumaad | Radio Himilo | Page 30
Home / Macluumaad (page 30)
21 September – Maalinta Caalamiga ee Nabadda
Mahad Mohamed September 21, 2019
Himilo- Maalinta Caalamiga ee Nabadda waxaa sanadle loo qabtaa 21-ka bisha September si loo garowsado dadaallada shaqsiyaadka, ururrada iyo dowladaha ay ku dhameynayaan colaadaha kuna soo dabaalayaan nabadda. Shinbirta ayaa u ah astaan lala xiriiriyo Maalinta Caalamiga ee Nabadda. Hal-ku-dhegga ...
Xaqiiqooyin ku saabsan biyaha
Ahmed Haadi September 20, 2019
Himilo – Waa dareere waxaase u dheer labo xaal oo kale. Waa noole bile aan laga maarmin. Waayidooda waxaa ku naf waaya kummannaan nafley ah. Waa dawada ugu horreysa uguna muhiimsan dunida. Waan ku abtirsannaa. Nolosha noolaha oo dhan ayaa ...
Mahad Mohamed September 19, 2019
Himilo- Xarun burkiyeer cusub oo Islaami ah tii ugu horreysay ayaa lagu furay caasimadda Tokyo taas bixin doonta adeeg ku saleysan Shareecada oo loogu adeegi doono gabdhaha Muslimaadka ah ee doonaya inay helaan meel ay isku qurxiyaan, sida laga soo ...
Mahad Mohamed September 18, 2019
Himilo- Dhallaanka dhawaan-dhaladka ah ayaa inbadan sameeya ooyin, waxaa loo arkaa tilmaam wanaagsan oo ka tarjumeysa caafimaadkiisa laakiin maxay tahay sababta aysan u ilmeyn dhallaanka toddobaadyada ugu horreeya? Waa su’aal ku soo laabatay maskaxda dad badan oo ay khubaro isku ...
Sidee ayay shinni sabab ugu noqotay dib u dhaca duulimaad diyaaradeed?
Mahad Mohamed September 17, 2019
Himilo- Duulimaadka diyaarad ay leedahay shirkada diyaaradaha Hindiya ee Air India ayaa dib u dhacay sabab la xiriirta weerar shinni sida warbaahinta dalkaasi laga soo xigtay. Shinni tiro badan ayaa lagu soo waramayaa inay dabooshay shaashada bannaanka ee duuliyaasha taasi ...
15 September- Maalinta caalamiga ee Dimuqraadiyada
Mahad Mohamed September 15, 2019
Himilo- Maalinta caalamiga ee dimuqraadiyada waa fursad lagu muujiyo in dimuqraadiyada tahay dadka oo wada leh xuquuq simman oo ku saleysan ka qeybgal loo dhan yahay. Waxaa lagu tiriyaa dimuqraadiyada tiir adag oo nabadeed oo kamid ah xuquuqda aadanaha islamarkaana ...
Sahan: Jaamacadaha ugu wanaagsan caalamka oo la magac dhabay
Mahad Mohamed September 14, 2019
Himilo- Kharashka, deegaanka iyo tayada ayaa kamid ah halbeegga ay ardayda ka eegaan jaamacadaha, haddana sumcadda waxay leedahay kaalin muhiim ah. Sahan ay sameysay Times Higher Education ayaa daaha ka qaaday jaamacadaha dunida kuwa ugu wanaagsan iyadoo la qiimeeyay ku ...
Wax-yaabaha sababa hoos u dhaca wax-soosaarka
Ahmed Haadi September 13, 2019
Himilo – Hoos u dhaca cunno soo saaridda waa dhibaato dhab ah oo ku foolan dunida, siiba dalalka ka hooseeyaa saxaraha Africa. Yaraanta gasiinka soo go’a waxaa sababay oo gondaha gooyey saboolnimada –dakhli liita–, isbedelka cimilada, iyo asbaabo kale oo ...
Maxaa midabka hoose ee maraakiibta looga dhigaa casaan?
Himilo- Waxay u badan tahay inaad aragtay ama telefishinka ka daawatay maraakiib midabka qeybtooda hoose laga dhigay casaan. Dad badan ayaa su’aalo ka keenay sababta midabkan gaarka ah loo doortay oo aan loo qaadan midabada kale. Baaritaano ayaa muujiyay in ...